Ukugqithiselwa kokwenza | Law & More B.V. | Inetherlands
Blog » Ukutshintshwa kokuqhutywa
Ukuba uceba ukugqithisela inkampani komnye umntu okanye ukuthatha inkampani yomnye umntu, usenokuzibuza ukuba ngaba oku kuthathwa kwemali kuyasebenza na kubasebenzi. Kuxhomekeka kwisizathu sokuba kutheni inkampani ithathiwe kwaye kwenziwa njani ukuthatha kwayo, oku kunokuba okanye kunganqweneleki. Umzekelo, ngaba inxalenye yenkampani ithathwa yinkampani engenamava kangako ngemisebenzi yeshishini? Kwimeko apho, kunokuba kuhle ukuthatha indawo kubasebenzi abakhethekileyo kwaye ubavumele ukuba baqhubeke nemisebenzi yabo yesiqhelo. Kwelinye icala, ngaba kukho ukudityaniswa kweenkampani ezimbini ezifanayo ukugcina iindleko? Emva koko abanye abasebenzi banokunganqweneleki, kuba ezinye izikhundla sele zigcwalisiwe kwaye ukonga okuninzi kunokwenziwa nakwiindleko zabasebenzi. Nokuba ngaba abasebenzi kufuneka bathathwe ngaphezulu kuxhomekeke ekusebenzeni kommiselo 'kugqithiso lwesithembiso'. Kule nqaku, sichaza xa kunjalo kwaye zithini iziphumo.
Lukhona ugqithiselo lwesithembiso?
Xa kukho ugqithiselo lwesithembiso esilandelayo kwiCandelo 7: 662 yeKhowudi yaseKhaya yaseDatshi. Eli candelo lichaza ukuba kufuneka kubekho unikezelo ngenxa yesivumelwano, ukudityaniswa okanye ukwahlulwa kweyunithi yezoqoqosho igcina iifayile zayo yesazisi. Iyunithi yezoqoqosho "liqela lezixhobo ezilungelelanisiweyo, ezinikezelwe ekuqhubekeni nomsebenzi woqoqosho, nokuba loo nto iphambili okanye ayincedisi". Ukusukela ukuba kuthathwe kuthathwe ngeendlela ezahlukeneyo ekusebenzeni, le nkcazo yezomthetho ayiniki sikhokelo sicacileyo. Ukutolikwa kwayo ke kuxhomekeke kakhulu kwimeko zetyala.
Iijaji ngokubanzi zibanzi kutoliko lwazo lokudlulisa izithembiso njengoko inkqubo yethu yezomthetho igqala kubaluleke kakhulu kukhuseleko lwabasebenzi. Ngokwesiseko somthetho okhoyo, kungagqitywa kwelokuba ibinzana lokugqibela 'iqumrhu lezoqoqosho eligcina isazisi' lelona libaluleke kakhulu. Oku kuhlala kuchaphazela ukuthathwa ngokusisigxina kwenxalenye yenkampani kunye neeasethi ezinxulumene nayo, amagama orhwebo, ezolawulo kunye, ewe, nabasebenzi. Ukuba kuphela licandelo lomntu elibandakanyekileyo koku, kuhlala kungekho kugqithiselwa kwesithembiso, ngaphandle kokuba lo mcimbi uyisigqibo esichazayo ukuba ungubani na.
Ngamafutshane, kuhlala kukho ukutshintshelwa kwesibhambathiso kwakamsinya nje ukuba kuthathwe kuthathe inxaxheba epheleleyo yokuzibophelela ngenjongo yokwenza umsebenzi wezoqoqosho, ophawulwa sisazisi sawo esigciniweyo emva kokuba sithathiwe. Ke ngoko, ukuhanjiswa (kwenxalenye) yeshishini elinophawu olungelolwethutyana kungekudala kukwenza utshintsho kwisithembiso. Ityala apho kungacacanga ukuba akukho tshintsho lwenziweyo kukudityaniswa kwesabelo. Kwimeko enjalo, abasebenzi bahlala kwinkampani enye kuba kukho utshintsho kuphela kubunini zabanini zabelo.
Iziphumo zokudluliswa kwesithembiso
Ukuba kukho ugqithiselo lwesithembiso, ngokomgaqo, bonke abasebenzi abayinxalenye yemisebenzi yezoqoqosho bayadluliselwa phantsi kwemeko zesivumelwano sengqesho nesivumelwano esidibeneyo esisebenza kunye nomqeshi wangaphambili. Akunyanzelekanga ke ukuba kwenziwe isivumelwano sengqesho esitsha. Oku kuyasebenza ukuba amaqela akayazi isicelo sokudluliselwa kwesithembiso kunye nabaqeshwa ebengazi nto ngomdlulisi. Umqeshi omtsha akavumelekanga ukugxotha abasebenzi ngenxa yotshintsho lwesithembiso. Kwakhona, umqeshi wangaphambili unoxanduva kunye nomqeshi omtsha unyaka omnye wokufezekisa uxanduva kwisivumelwano sengqesho esivele ngaphambi kokudluliselwa kwesithembiso.
Ayizizo zonke iimeko zengqesho ezigqithiselwa kumqeshi omtsha. Isikimu sepenshini sikhethekile kule nto. Oku kuthetha ukuba umqeshi angafaka isicelo senkqubo efanayo yomhlala-phantsi kubasebenzi abatsha njengoko isenza kubasebenzi abakhoyo ngoku ukuba oku kubhengezwe kwangexesha kudluliso. Ezi ziphumo zisebenza kubo bonke abasebenzi abasebenza kwinkampani yokuhambisa ngexesha lokudlulisa. Oku kukwasebenza nakubasebenzi abangawulungelanga umsebenzi, abagulayo okanye iikhontrakthi zethutyana. Ukuba umqeshwa akafuni kutshintshela kwishishini, unokuchaza ngokucacileyo ukuba unqwenela ukusiphelisa isivumelwano sengqesho. Kuyenzeka ukuba uthethathethwano malunga neemeko zengqesho emva kokudluliselwa kwenkampani. Nangona kunjalo, iimeko zengqesho ezindala kufuneka ziqale zidluliselwe kumqeshi omtsha ngaphambi kokuba kwenzeke oku.
Eli nqaku lichaza ukuba inkcazo yezomthetho yokugqithisela isithembiso izalisekiswa kungekudala xa isenziwa kwaye oku kuneziphumo eziphambili ngokubhekisele kubophelelo kubasebenzi. Ukugqithiselwa kwesibambiso kunjalo kwimeko xa iyunithi yezoqoqosho yeshishini ithathwa lelinye ixesha elingesosigxina, apho ubume bomsebenzi bugcinwa. Ngenxa yommiselo wotshintsho lwesithembiso, umntu othatha indawo kufuneka aqeshe abasebenzi (inxalenye) yesithembiso sokudlulisa phantsi kweemeko zengqesho esele zisebenza kubo. Umqeshi omtsha ke akavumelekanga ukuba abagxothe abasebenzi ngenxa yotshintsho lwesithembiso. Ngaba ungathanda ukwazi ngakumbi malunga nokudluliselwa kwesithembiso nokuba lo mthetho uyasebenza kwiimeko zakho ezithile? Ke nceda unxibelelane Law & More. Amagqwetha ethu abaluleke kakhulu kumthetho wamashishini kunye nomthetho wezabasebenzi kwaye bangakuvuyela ukukunceda!
Post edlulileyo Isivumelwano selayisensi
Post Next Isivumelwano soMnikeli: Yintoni ekufuneka uyazi?